Amaphuzu Okufanele Ukwaziwe Ngaphambi kokuthengwa Kwekhamera Etshelwe Umzimba | Izixazululo ze-OMG
Amaphuzu Okufanele Ukwaziwe Ngaphambi kokuthengwa Kwekhamera Etshelwe Umzimba
Amakhamera agqokwa ngomzimba (i-BWC) asemude kakhulu isikhathi esifushane ukusuka kumakhamera wevidiyo amarekhodi alula kuphela kuya kumakhamera anikeza ikhwalithi ehlukile yokubuka umsindo nokuqina. Ngokombono womphakathi, amakhamera agqokwa ngomzimba akhulisa ukuziphendulela nokucaca kwamaphoyisa kanye nonogada. Ukuziphatha kwabasebenzi nokuziphatha kwephoyisa kuyabonakala ngcono ngokufakwa okulula kwekhamera egqoke umzimba kumishini yabo. Kwenzeka okufanayo nakumalungu omphakathi; Izikhalazo nokuziphatha okuhlaselayo okubhekiswe emaphoyiseni nabasebenzi bezokuphepha kunciphisa kakhulu ezindaweni lapho umzimba ogqokwa khona we-cam ukhona.
Ukukhetha okuningi kwamakhamera atholakalayo emakethe kungenza ukukhetha okukhethayo kube kokudidayo. Ikhasimende kufanele liqale lazi ukuthi yiziphi izidingo zazo. Bafuna iBWC yabagadi bezimoto, izisebenzi zodwa, onogada, abasebenza ejele nabasebenza nabezimo eziphuthumayo njengabantu bomlilo noma abezimo eziphuthumayo. Njengoba ukusetshenziswa kwekhamera yomzimba kungasetshenziswa njengobufakazi ngesikhathi sokuqulwa kwecala enkantolo, izinkampani kufanele ziqiniseke ukuthi imikhiqizo yazo ilandela imigomo ehlukile maqondana nokugcina ubufakazi bedijithali. Kunezici ezimbalwa ezejwayelekile zokuqinisekisa ubuqotho bedatha. Amazinga okugunyazwa ahlukahlukene aqinisekisa ukuthi iphoyisa eligqoke ikhamera alinayo indlela yokuphazamisa ividiyo, liyisuse, noma ilishintshe.
ukwenza isibonelo, Ku-OMG ukuphathwa komthetho kobufakazi bokuPhepha okuVikelekile Mini Mini Worn nge-Encryption [Nge-LCD Screen] (BWC060) inamazinga okugunyazwa:
Umsebenzisi uvumela ukuqopha nje futhi uphila ukusakaza, kepha akukho ukususwa kwefayela noma ukufinyelela kumafayela aqoshiwe
Amavidiyo azobethelwa kabili nge-AES256 ne-RSA2048. Umphakathi ngeke ukwazi ukufinyelela amavidiyo yize ephula ikhamera. Abasebenzisi kuphela abane-RSA Private Key abangabuka amavidiyo
Lawa amanye amaphuzu asemqoka okufanele uwakhumbule ngaphambi kokuthenga ikhamera egqoke umzimba.
Amakhamera agqokwe umzimba anezinto zokurekhoda zangaphambi kokuqopha kanye nenkinobho eyodwa ezenza zilungele ukusetshenziswa ngenkathi izikhulu zisenkundleni. Isikhulu kufanele sikwazi ukusebenzisa i-cam kalula uma kuba nesimo esiphuthumayo. Idivayisi kufanele futhi inike amandla abasebenzisi ukuphatha nokugcina amavidiyo kalula ngoba imvamisa inqubo edla isikhathi.
Amakhamera asindayo ngokungadingekile angathinta ukusebenza kwezokuphepha futhi abavimbele ekwenzeni umsebenzi wabo. Yebo, bafuna ukuba ukuqoshwa kwabo kube njengamabhande futhi kube nokuqina kepha isisindo esengeziwe ngokweqile kungaba umthwalo emgqeni womsebenzi. Njenge-Light Weight WIFI Law Enforcing Body-Worn camera Camera, Video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Umbono wobusuku (BWC052) angakwazi ukunamathisela kalula ephaketheni noma phambi kwehembe ukurekhoda njalo ngomzuzu womphakathi.
Ukuphatha imininingwane erekhodwe yikhamera kubaluleke kakhulu. Ngoba usayizi we-footage uzoba mkhulu; kubalulekile ukuthi ukubuyisa nokugcina idatha kufanele kube lula futhi kulawuleke. Abasebenzi bezokuphepha bangaphambili nezomthetho bathembela kuma-video ukufakazela ukuthi benza ngokweqile noma bebamba abantu abenze ubugebengu. Ngalesi sizathu, badinga ukuthi babe nedivaysi okulula ukuyisebenzisa, ethembekile nephephile. Imikhiqizo yethu inesitoreji sangaphakathi sekhadi le-SD lesitoreji sedatha esikhulu kanye nesiteshi sokumisa se-20 ukugcina idatha nokuvuselela.
Isisindo yinto ebalulekile uma kukhulunywa ngenduduzo nosayizi. Ukukhanya okulula, okungcono kogqokiwe. Yize umsebenzisi kuzodingeka alinganise isisindo ngokumelene nezici, usayizi, nokuqina. Ama-ejensi ezokuphepha akafuni ukuthenga ikhamera ephuka kalula futhi idivaysi kufanele ibe ne-Hardware ne-software eyidingayo ngezidingo zayo.
Ikhamera esetshenziswayo ye-OMG egqoke i-Headset Body Worn Camera (BWC056) okubuye kuboniswe esithombeni kulula ukugqoka ikakhulukazi kulabo abafuna ukuqopha noma yimuphi umsebenzi wokuphila kwansuku zonke, futhi nezikhulu zezokuphepha zingabeka kalula ekhanda. Ikhamera ye-miniweight engasindi, ephathekayo, engenakugqokwa, elula ukuyisebenzisa
Inzwa ye-Sony 8.0MP CMOS
I-1080P yokuqopha okugcwele kwe-HD
Ukushaya ucingo lwe-Bluetooth nomculo
Ukuxhumeka kwe-WIFI nokulawulwa kwe-APP
Ilungele izikhathi ezahlukahlukene ezinjengobuciko betiye, upende, ukupheka, ukudoba, ukuhlolwa kwamakhemikhali, njll. Sekela ikhadi le-max 64GB TF ukufeza izimfuno zakho.
Ukumelana Nesimo Sezulu
Amakhamera agqokwe umzimba ahlala esengozini ezintweni zemvelo. Ikhamera yomzimba wamaphoyisa kufanele ikwazi ukumelana nanoma yisiphi isimo sezulu esibi nezimo zemvelo endaweni yokusebenza kwazo. Imvula, iqhwa nezinye izimo zezulu kungathinta ikhwalithi yokurekhodwa, ngakho-ke ukuthenga irekhoda yevidiyo esebenza kahle ngaphansi kwanoma yiziphi izimo kubalulekile. Ikhamera Yethu Yomzimba Wamaphoyisa (BWC004) ukuba ne-lens ye-6G ingilazi engabonakali, ukulungiswa kwevidiyo ye-FHD eyiqiniso, ne-IP67 engamanzi enekona le-140 ekwazi ukusebenza ngemvula, iqhwa nezinye izimo zezulu.
Impilo yebhethri ye-BWC kufanele ivumele ikhamera ukuthi isebenze lonke ushintsho ngaphandle kokuthi iphinde ithengiswe. Ikhamera ayisebenzi ngokuqhubekayo kepha kunalokho ivulwa yisiphathi-mandla njengoba kufunwa yinqubomgomo yamaphoyisa. Ngokwesilinganiso, iphoyisa liqopha phakathi kwamahora amabili kuya kwamathathu ngesikhathi sokuhamba kwamahora ayisishiyagalombili. Amashifu angamahora ayishumi kuya kwe-12-awa adinga impilo yebhethri ende, imikhiqizo yethu inamahora we-16 amahora wempilo yebhethri.
Inkambu evundlile yokubukwa kwe-BWC imaphakathi kwama-90 nama-130 degrees. Ilensi ebanzi ebanzi ingathwebula ngaphezulu kwesehlakalo esithile, futhi inikeze imininingwane eminingi kunesidingo. I-lens ebanzi engezansi ingahle igcine izithombe ezinjalo ezingabonwa ngamehlo esikhulu i-Mini HD body Worn Police Camera, 12MP OV2710 140 Degree Camera, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Long Time Work (BWC053) that degrees amakhamera angaphezu kwejwayelekile futhi anikeze isithombe esibanzi.
Izinhlangano eziqinisa umthetho zenza imisebenzi yazo imini nobusuku; ngakho-ke, nabo badinga umbono wobusuku. Yize amanye ama-BWC eza nenketho yokubuka ebusuku, kunokuntuleka kwamanani ahlukahlukene futhi awanakukwazi ukusebenza kwezimo zezulu Ikhamera yethu Yomzimba Ojwayelekile WamaMini, i-1296p, i-170Deg, amahora angama-12, i-GPS, i-Night Visual (BWC010) futhi kungangeni manzi kuhambisane nazo zonke izimo zezulu.
Abasebenzisi bavame ukusebenzisa ikhamera yomzimba yokuphepha lapho-ke kufanele badinge uhlelo lwe-docking. Lobu buchwepheshe buyavela ukuze kuvunyelwe ukulayishwa kwevidiyo enkundleni, iningi le-BWC liza njengohlelo olufaka “isiteshi sokuphephela.” Iziteshi zokudonsa zikhokhisa iyunithi ye-BWC, futhi amasistimu wokuphela aphezulu abuye adlulise noma alayishe ukuqoshwa kwedijithali kumaseva noma isitoreji samafu. Kumamodeli amaningi we-BWC, iphoyisa lizofaka uphiko lwamakhamera esiteshini sedokodo lapho libuyela emnyangweni lapho seliqede umsebenzi. Uma iziqeshana zevidiyo zingazange zifakwe izigaba ngaphambili noma zifakwe uphawu, iphoyisa noma elinye ilunga lomnyango lingenza lokhu okwamanje. Sinikezela ngamachweba we-8, amachweba we-10, amachweba we-12, amachweba we-20 kanye neziteshi zemigwaqo ze-8 ezineziteshi zokubonisa iziteshi kumakhasimende ethu.
Olunye ucwaningo lusinikeza amasu amathathu enza ividiyo ibe sobala.
Amasu amathathu okwandisa ukucaca kwekhamera yomzimba
Abaphathi bamaphoyisa kumele baqinisekise ukuthi abaphathi babo bahambisana nezinqubomgomo zomnyango maqondana nokusebenzisa nokusebenzisa amakhamera. Iningi leminyango ligunyaza ukuthi izikhulu zisebenzise amakhamera azo womzimba ngaso sonke isikhathi lapho zihlangana nomphakathi. Kodwa amanani okuhambisana nawo avame ukuba aphansi, kanti ezinye izikhulu zisebenza ngamakhamera wazo ezimweni ezingekho ngaphansi kwe-2 zephesenti. Ngenkathi ubuchwepheshe obusha bungathuthukisa ukuhambisana kwamaphoyisa njengamakhamera avulwa ngokuzenzakalelayo lapho kuthunyelwa izingcingo noma kudonswa izikhali iminyango kumele yenze umsebenzi ongcono wokulandela ukulandelwa kwemithetho futhi ibhekane nayo lapho izikhulu zingazilandeli imigomo.
Iziphathimandla kufanele zazise abantu abaxhumana nabo lapho amakhamera abo omzimba eqopha. Eminyangweni eminingi yamaphoyisa, izinqubomgomo ziphakamisa kepha zingagunyazi ukuthi izikhulu zitshele amalungu omphakathi lapho amakhamera awo esebenze futhi eqoshwa. Ngenxa yalokhu, bambalwa abantu abawaziyo amakhamera ngenkathi behlangana namaphoyisa.
Iminyango kufanele isebenze ngokushesha okukhulu ukukhipha amavidyo khamera omzimba ezehlakalweni ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izehlakalo lapho kuceliwe. Ezifundazweni eziningi, umphakathi ungafinyelela amavidyo ngezicelo zamarekhodi avulekile. Kepha le nqubo ingabambezeleka lapho amavidyo ayingxenye yophenyo oluqhubekayo noma uma iqukethe imininingwane (njengobuso, amapuleti elayisense, noma imininingwane eyimfihlo) okumele yenziwe kabusha ngaphambi kokukhishwa.
Amakhamera agqokiwe ajoyina ubuchwepheshe obuningi obuzosiza bonke abasebenzi bezimo eziphuthumayo basebenze ngempumelelo nangokuphepha emkhakheni. Manje ngemuva kwemininingwane yenza izinqumo ngamakhamera womzimba kanye nengqalasizinda yazo esekayo kulula ukwamukela lawa madivayisi namakhono okuxhumana futhi awanwebise kubasebenzi abaningi ngokuzayo.
Ukuhamba phambili, i-PC f., Nd [Online]
Itholakala ku: https://pceinc.org/wp-content/uploads/2018/03/20180301-Police-Body-Worn-Cameras_What-Prosecutors-Need-to-Know-White-and-Case-and-PCE.pdf
IGogol, Mina, 2016 / 01 / 18. asmag.com. [Online]
Itholakala ku: https://www.asmag.com/showpost/19727.aspx
UKUPHATHA, E, i [Online]
Itholakala ku: https://www.nccpsafety.org/assets/files/library/Handbook_for_Public_Safety_Officials-_Body_Camera_Program.pdf
UPeterson, B., Meyi 29, 2018. I-URBAN INSTITUTE. [Online]
Itholakala ku: https://www.urban.org/urban-wire/three-ways-police-can-use-body-cameras-build-community-trust
Imikhiqizo, nd Ukuqiniswa Komthetho kwe-OMG - Ikhamera yeWorn Worn (DVR / WIFI / 3G / 4G) / Ukuphathwa kobufakazi beDijithali - eSwitzerland. [Online]
Itholakala ku: https://omg-solutions.com/body-worn-camera/
Ezokuphepha, R., nd Ukuphepha Kwe-Rewire. [Online]
Itholakala ku: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/body-worn-camera-cctv-security
Amaphuzu Okufanele Ukwaziwe Ngaphambi kokuthengwa Kwekhamera Etshelwe Umzimba igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4592 Ukubuka kwe-1 Namuhla